Global Voices teny Malagasy » Ireo ankizy tsy manana taratasy ara-dalàna ao Iran · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 28 Aogositra 2019 7:49 GMT 1	 · Mpanoratra Fred Petrossian Nandika Salohy Randriafanomezantsoa
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Iràna, Fampandrosoana, Fanabeazana, Fitantanam-pitondrana, Foko sy Fiaviana, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona
Ankizy Baloch any Iran. Sary  avy amin'ny Mostafameraji (CC BY-SA 4.0)
Olona miisa iray tapitrisa mahery no tsy manana taratasy ara-dalàna  ao Iran, ary ankizy no maro an'isa amin'izy ireo. Ny iray amin'ireo antony lehibe amin'ity toe-javatra mampahonena ity ny lalàna tranainy iray efa am-polo taonany izay mandrara ny vehivavy Iraniana tsy hanambady vahiny amin'ny zo hanome ny zom-pireneny amin'ny zanany. Efa maizina sahady ny hoavin'ireo ankizy Iraniana an'arivony raha mbola tsy teraka akory aza izy ireo. Tsy afaka mianatra, tsy mahazo fikarakarana ara-pahasalamana ireo ankizy ireo ary tsy tafiditra ao anaty angondrakitra nasionaly ihany koa ny anaran'izy ireo.
Maro ny olona tao amin'ny firenena no nankalaza tamin'ny volana Mey 2019 rehefa nanitsy  ny lalàna manavakavaka ny Majlis (parlemantera) ao Iran. Nankatoa ny fanitsiana ny Filankevitry ny Mpiandry, vaomiera mandinika ny lalàna rehetra nolanian'ny depiote, saingy nampiany fa azo ampiasaina ho antony hitazomana ny fanomezana zom-pirenena ny “olana ara-piarovana”.
Saingy tsy hamongotra ny fanavakavahana rehetra atrehin'ny ankizy “tsy misy anarana” ny fanovana ny lalàna. Ny vahoaka Baloch vitsy an'isa miisa  roa tapitrisa ao Iran, ohatra, izay mipetraka any amin'ny faritra mahantra akaikin'ny sisin-tany ifanolorana amin'i Pakistan sy Afghanistan dia iharan'ny fanavakavahana goavana avy amin'ny manampahefana Iraniana, izay mampiasa ny politikany amin'ny fanakanana ny vahoaka Baloch marobe tsy hanana zom-pirenena feno.
Nasser Boladai, mpitondratenin'ny Antokom-Bahoakan'i Balochistan  sady filohan'ny Fikambanam-Bahoaka sy Firenena tsy voasolotena  (UNPO), niteny tamin'ny Global Voices fa:
Baloch ray Baloch reny—izany hoe Iraniana—ny ankamaroan'ny ankizy nolavina tsy hanana zom-pirenena na dia misy aza ny ankizy Baloch manan-dray vahiny ary mipetraka any amin'ny faritany Balochistan na any amin'ny faritra hafa any Balochistan izay anisan'ny faritany be mponina any Kerman sy Hormozgan ankehitriny .
Miisa 40.000 eo ho eo ny isan'ireo ankizy manan-dray sy reny Baloch kanefa tsy manana karapanondro araka ny tombantomban'ny governemanta, raha nametraka ny isa ho avo roa heny kosa ny tombantombana avy amin'ny loharanom-baovao ao an-toerana hafa, izany hoe eo amin'ny 80.000 ka hatramin'ny 100.000 eo ho eo.
Nanambara ny halalin'ny fahoriany ny fijoroana vavolombelona  nataon'ny vahoaka Baloch: avy amin'ireo reny izay manana nofinofy goavana amin'ny fandefasana ny zanany any an-tsekoly, sy avy amin'ireo vehivavy Iraniana izay manontany ny antony nanagiazan'ny manampahefana ny karapanondron'izy ireo, ka nahatonga azy ireo ho tsy afa-manoatra.
Ny antony iray tsy hananan'ny zaza Baloch sasany karapanondro Iraniana ny halaviran'ny faritra honenan'ny ray aman-drenin'izy ireo sady tsy mahay mamaky teny no tsy mbola nanana karatra mihitsy hatrizay ary tsy nangataka izany ho an'ireo zanany ihany koa .
Voafandrika tamin'ny fomba fitantanam-panjakana Kafkaesque ao Iran ny olona sasany. Amin'ny tranga sasany, angatahina hanao fitiliana ADN izy ireo, izay tsy takatry ny maro. Amin'ny tranga hafa, nogiazana ny karapanondro efa misy satria voalaza fa hohamarinina ny maha-azo antoka azy. Mihevitra ny fihetsika toy izany ho anisan'ny politikan'ny fanavakavahana misy atao amin'ireo vondrom-poko sasany, indrindra fa ny Sonita sy ny Balochs ny mpikatroka ara-politika sy sivily sasany .
Nilaza i Boladai fa tamin'ny tranga sasany, nogiazan'ny manampahefana Iraniana na nofoanana ny kopia fanamarinana ny fahaterahan'ny Balochs rehefa mandeha hanao fanavaozana ny antontan-taratasiny na mangataka karapanondro izy ireo. Mihevitra ny Baloch sasany fa natao hanasaziana ireo mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina izay tsy nanohana ny fampielezan-kevitry ny fitondrana ity fepetra ity. Mihevitra ihany koa i Boladai fa ampiasaina izy ireo ho ” antony amin'ny fampandrosoana hanovana ny fandinihana ny isan'ny mponina ao amin'ny faritra, mba hahatonga ny Baloch ho vitsy an'isa ao amin'ny tanindrazany.” Araka ny filazan'i Boladai, mikasa ny hamindra olona miisa 2 ka hatramin'ny 5 tapitrisa ny governemanta mba hahatratrarana an'io tanjona io ho any amin'ny faritra morontsiraka any Balochistan, any amin'ny faritany Sistane-Balochistan sy Hormozgan.
“Midika fahasarotan'ny fahazoana fankatoavana ho olom-pirenena sy ny fananana mari-panondroana iraisana eo amin'ny fiarahamonina ny tsy fananana karapanondrom-pirenena,” hoy Azadeh Pourzand, mpikaroka momba ny zon'olombelona sady tale mpanatanteraka ao amin'ny Orina Mpanasoa Siamak Pourzand raha niresaka tamin'ny Global Voices. “Noho izany, tokony ho tsaroana ny zava-tsarotra maro ara-pihetseham-po sy ara-psikolojika izay atrehin'ny ankizy Balouch izay tsy afaka manana karapanondro .” Tsy afaka misitraka ny tolotra omen'ny governemanta ny olona toy ny fitsaboana sy ny fanabeazana raha tsy misy antontan-taratasy fanamarinana. “Ny iray amin'ireo antony lehibe indrindra – fa tsy izay ihany – mahatonga ny ankizy Baloch an'arivony tsy afaka mankany an-tsekoly”, hoy i Pourzand, “dia ny tsy fananan'izy ireo karapanondro – zava-misy izay nitarainan'ireo manampahefana tamin'ny gazety sy ny fampitam-baovaon'ny fanjakana. Na izany aza, mbola kely ny zavatra natao mba hamaranana ny toe-java-tsarotra atrehan'ny ankizy Baloch. ”
Ao anaty trano zara fa naorina sy atahorana hianjera ireo ankizy no mianatra na dia afaka mandeha any an-tsekoly aza izy ireo, hoy i Pourzand, izay mety hampidi-doza azy ireo amin'ny fianjeran'ny valindrihan'ny sekoly sy ny rindrina ho eo an-tampon-dohan'izy ireo amin'ny fotoana tsy ampoizina. Ary toy izany ihany koa, mianjady amin'ity faritra mahantra ao amin'ny firenena avokoa na ny (tsy) fahazoana rano madio, na ny angovo hiantohana ny mari-pana mahasalama any an-tsekoly sy any an-trano na ny fitsinjovana ara-pahasalamana mampahonena. “
“Noho ny tantaran'ny Repoblika Islamika amin'ny fanavakavaham-poko sy antokom-pinoana vitsy an'isa,” hoy i Pourzand,” dia toa niniana natao ny fanaovana lasibatra amin'ny fanenjehana ireo vondrona ireo, ny tsy fisian'ny fotodrafitrasa, ny tsy firaharahiana ara-toekarena ary ny halalin'ny fahantrana, ary endrika fanavakavahana izay miteraka fanavakavahana hafa ihany koa noho izany. ”
Araka ny filazan'i Nasser Boladai, tokony ho afa-mijanona ao an-tanànany ihany ny vahoaka Baloch ary manohy ny fomban-drazany amin'ny fambolena sy ny fiompiana, kanefa maro no voatery nandao ny tanànakeliny noho ny tsy fisian'ny fotodrafitrasa sy ny fahasarotan'ny fambolena ny tany. Lasa nahasarika ny sain'ny maro ny toe-javatra niainan'ireo vahoaka Baloch tamin'ny fifindrana mankany amin'ny tanàna itatra an'i Chahbhar, Zahidan ary Tehran mba hitady asa ho mpikarama isan'andro. “Imbetsaka izy ireo no iharan'ny fandrahonana na daroka ary voatery niala ny fonenany ary nitady toeran-kafa honenana ,” hoy i Boladai. “Voalaza fa mitombo ny isan'ireo vahoaka Baloch tsy manana mari-panondroana raha tokony hihena.”
Efa ao anatin'ny ADN-n'ny Repoblika Islamika hatramin'ny niandohany ny politikan'ny famoretana ataon'ny manampahefana Iraniana amin'ireo foko sy ny antokom-pinoana vitsy an'isa . Tao anatin'ity lalao naharitra amam-polo taonany maro ity no niovan'ny vahoaka Baloch an'arivony tsy ho olom-pirenena saranga faharoa intsony fa ho lasa olombelona tsy hita(-n'ny mpitondra) maso.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/08/28/142361/
 tsy manana taratasy ara-dalàna: https://tinyurl.com/y22wex25
 vahoaka Baloch vitsy an'isa miisa: https://en.wikipedia.org/wiki/Baloch_of_Iran
 Antokom-Bahoakan'i Balochistan: https://en.wikipedia.org/wiki/Balochistan_People%27s_Party
 Fikambanam-Bahoaka sy Firenena tsy voasolotena: https://www.unpo.org
 fijoroana vavolombelona: http://www.salamatnews.com/news/200205/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B1%D8%B2%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
 foko sy ny antokom-pinoana vitsy an'isa: https://foreignpolicy.com/2013/04/03/irans-forgotten-ethnic-minorities/